ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ အဓိကလမ်းမကြီး ၁၂ ခုတွင် သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်များ စိစစ်ခွင့်ပြုမည် - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ မတ် ၇ – ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အဓိက လမ်းမကြီး ၁၂ လမ်းပေါ်တွင် သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်များ စိစစ်ခွင့်ပြုသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှသိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ဝေဇယန္တာလမ်း၊ ပါရမီလမ်း၊ မင်းဓမ္မလမ်း၊ ပြည်လမ်း၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ စက်မှု ၁ လမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အနော်ရထာလမ်း၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်လမ်းမကြီး၊ သံသုမာလမ်းမကြီးများတွင် သင်္ကြန် မဏ္ဍပ်များစိစစ် ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေ သကြီး မဟာသင်္ကြန်သီချင်း၊ သံချပ်စိစစ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်က မတ် ၇ ရက်တွင်ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
”ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့လမ်းမကြီး ၁၂ လမ်းမှာ သင်္ကြန် မဏ္ဍပ် ဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးသွားမယ်။ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမှာ တော့ မဏ္ဍပ်ဆောက်လုပ်ခွင့်မပေးပါဘူး။ ခုသတ်မှတ်ထားတဲ့ လမ်းတွေမှာ မဏ္ဍပ်အကြီးနဲ့ အလတ်ဆောက်လုပ်ခွင့်ကို လျှောက် ထားရမှာဖြစ်ပါတယ် ”ဟု ¤င်းက ပြောသည်။
ရေကစားမဏ္ဍပ်အကြီးနှင့်အလတ်ဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက် လွှာများကို မတ်လ ၁ ရက်က စတင်၍ ရန်ကုန်စည်ပင်(လမ်းတံ တား) ဌာနတွင် ထုတ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး မတ်လ ၂၅ ရက် နောက် ဆုံးထားလျှောက်ထားခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် မဏ္ဍပ်တည်ဆောက်ရေးအတွက် လျှောက် လွှာ ၁၅ စောင်ထုတ်ယူမှုရှိရာ မတ် ၇ ရက်အထိ အင်းလျားလမ်း နှင့် မြကျွန်းသာပန်းခြံတို့တွင်ပြုလုပ်မည့် လမ်းလျှောက်သင်္ကြန် အတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းမှုနှစ်ခုရှိကြောင်း ရန်ကုန်စည် ပင်၊ လမ်းတံတားဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
မဏ္ဍပ်အကြီးနှင့် အလတ်ဆောက်လုပ်ခွင့်ကို ရန်ကုန်စည် ပင်၊ လမ်းတံတားဌာနတွင် လျှောက်ထားရပြီး မြို့နယ်အလိုက် မဏ္ဍပ်အသေးများမှာ သက်ဆိုင်ရာခရိုင်၊ ထွေအုပ်များ၏ ခွင့် ပြုချက်ဖြင့် တည်ဆောက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုနှစ်တွင်မဏ္ဍပ်အကြီးနှင့်အလတ် စုစုပေါင်း ၃၅ ခုခွင့် ပြုပေးရန်လျာထားပြီး ကိုယ်ပိုင်အိမ်နှင့်ခြံများရှေ့တွင် မဏ္ဍပ် ဆောက်လုပ်မည်ဆိုပါကလည်း ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိ ရသည်။ွှ
ပြည်ပမှ ငါးခြောက်ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်းထားခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းငါးခြောက်လ
ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ၏ကျွမ်းကျင်မှုသည် ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းလိုသည့် ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းသဘာဝ??
မုံရွာတွင် ဆောင်းကြက်သွန်နီ စိုက်ရန် မြေငှားခနှင့်မျိုးစေ့များ ခုန်တက်နေ မျိုးစေ့ကို မကွေ
ရွှေဘိုပေါ်ဆန်း စပါးမျိုးစေ့ကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ ရန်ပုံငွေဖြင့် ဝယ်ယူ၍ တောင်သူထံ ပြန်လ
သြဂုတ် ၈ ရက်နေ့ကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် တောင်းဆိုမှုများဖြင့် ပုသိမ်တွင် ရ??
သပ်ရပ်သောဆိုင်ခန်းများဖြင့် ကမ်းနားလမ်း ည ဈေးကို အဆင့်မြှင့်မည်
”အသက်ကြီးသွားရင်လည်း အသက်ကြီးတဲ့ကားတွေ အများကြီး ရိုက်လို့ရတယ်၊ ငယ်ရွယ်တုန်းမှာ လူငယ်ကား??